Nlele mbu maka 'ogbugbu Halloween' abịarute - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Nlele mbu maka 'ogbugbu Halloween' abịarute
Nlele mbu maka 'ogbugbu Halloween' abịarute
by Trey Hilburn III September 11, 2021 5,212 echiche
Igbu Halloween enyocha ya na ememme ihe nkiri Venice na ọ nwere ncha ncha na obere ụzọ nke ịdị mma. Yabụ, ọtụtụ nleghara anya n'eziokwu, na ọ na -echegbu m ntakịrị. M na -ejikarị mkpụrụ nnu na -ewere ihe ndị a mana ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na -abaghị n'ime ya na -atụ n'anya.
N'iso nyocha a, ọtụtụ Tweets wụsara nke na -atụkarị aro na ihe nkiri ahụ bụ ntakịrị ọgbaghara n'ozuzu ya. N'ikpeazụ, ha na -eji "ihe mgbagwoju anya". Okwu ahụ gosipụtara ọtụtụ. Otu a ka "fan boy" na "fan fan" mere.
Lelee ụzọ ya nke ọma ịhụ ụzọ abụọ maka ihe nkiri ndị gara aga, mana mgbe ihe nkiri ahụ ghọrọ ihe ntụgharị nke isi mmalite iji mejuo elekere 2 na ntigide mgbe niile, ọ bụghị ihe anyị na -achọ.
O yikwara ka a ga -enwe ọtụtụ mmeghachi omume na -ekwu na stakes adịghị ebe ahụ na nke a anaghị eme nke ọma ịkwaga akụkọ Strode na Myers. Ozi ọma ahụ bụ na ọtụtụ n'ime ndị a na -ekwu na ọnụ ọgụgụ igbu mmadụ dị elu n'ezie na gore adịghị. Yabụ, anyị nwere ike lee anya nke ahụ.
Isiokwu nke iru uju na mmerụ ahụ na echiche ndị na -eme ihe ike na -adịkwa ka ọ nọ n'isi mmeghachi omume ndị a.
N'akụkụ na -adịghị mma ọzọ, ọtụtụ akara sitere na mpaghara 2.5 wee hụkwa di na nwunye 1 n'ime 5. Enwere mmadụ anọ n'ime mmadụ 4 n'ime 5 mana ezughị iji gbasaa na -akpachapụ anya.
Otu n'ime ihe na -enye nsogbu na nkwupụta nke yiri ka ọ na -egosipụta n'ọtụtụ nyocha bịara na onye nta akụkọ Hollywood David Rooney onye kwuru, "Nkeji ọhụrụ a dị ka nkpuchi latex ghoul nke agbatịkwara na enweghị ntụpọ ọ dabara na ya."
Enweghị m ike ijide onwe m na Venice bụ ebe na -ezighi ezi maka onye ogbugbu igbu mmadụ. A nụbeghị ya, mana enweghị m ike inye aka nwee mmetụta ahụ Igbu Halloween gaara eme nke ọma karịa na mmemme ụdị, dịka Fantasia ma ọ bụ Fantastic Fest.
Mmeghachi omume na -adịghị mma ndị mbụ a na -echegbu gị? Ị ga -enwe ike ịhụ n'onwe gị mgbe Igbu Halloween na -akụ ihe nkiri malite na Ọkt. 15.